Vaovao - fampidirana fohy momba ny teknolojia fampifangaroana sy fanaparitahana ultrasonic
Fampidirana fohifohy momba ny teknolojia fampifangaroana ultrasonika mitambatra sy fanaparitahana
Ny teknolojia fampifangaroana ultrasonika mifangaro sy manaparitaka teknolojia dia misy ifandraisany amin'ny homogenizer jet, indrindra amin'ny homogenizer jet ultrasonic jet fluid. Ny teknolojia iorenany dia homogenizer jet ultrasonic dynamique fluid.
Ny teknolojia fampifangaroana sy fanaparitahana nentim-paharazana dia matetika mamporisika ny haitao paddle, ary ny teknolojia fampifangaroana sy fanaparitahana anay dia teknolojia ultrasonic mahery vaika.
Araka ny fitsipiky ny ultrasound, ny ultrasound dia azo zaraina ho sokajy roa: ultrasound elektrika sy ultrasound hydrodynamic. Na dia misy fiantraikany homogenization tsara amin'ny poti-javatra aza ny jet electrogen-ultrason homogenizer, dia mitaky fitaovana elektrika ivelany, vidiny lafo, fanjifana herinaratra lehibe ary fahaiza-manao fanodinana kely, ka tsy mety amin'ny fampiharana malalaka amin'ny indostria; ny fampiasana ny homogenizer hydrogennamic jet homogenizer Fluida (mazàna dia entona na ranon-javatra) dia ampiasaina ho hery manosika hanaitaitra ny bararata ao anaty jet homogenizer hihozongozona. Rehefa mifanaraka amin'ny refy voajanahary amin'ny bararata ny refin'ny intrinsika ny jet medium, dia mipoitra ny resonance ary mamoaka onja ultrasonic. Ary eo ambanin'ny hetsiky ny ultrasound mahery vaika, dia miteraka hafanana avo, izay manatsara ny fahafangaroan'ny tsiranoka lehibe sy ny tsiranoka faharoa, mampihena ny haben'ny tsiranoka ao anaty tsiranoka, mampiroborobo ny fanehoan-kevitra simika, manafaingana ny fahafahan'ny isan-karazany tsiranoka mba hifanelanelana, ary hanafainganana ny fifangaroana, Mba hanatsarana ny fitoviana amin'ny fifangaroana, ary onjampeo an'habakabaka an'arivony maro no miseho eo amin'ny sahan'ny kavitera, misy fiantraikany hatrany amin'ny fifangaroan'ny tsiranoka, manorotoro ny tsiranoka faharoa ho lasa vongan-tsakafo micron na nanometer, ary aparitaho amin'ny laoniny ao anaty ranon-javatra lehibe izy ireo, Mamorona dingana miparitaka.
Tetikasa fampiharana ny vokatra amin'izao fotoana izao izay mampiasa teknolojia fampifangaroana ultrasonika sy tsiranoka mampiely:
1. Fitaovana fanomanana rano manankarena hidrônamika ultrasonôniôma
2. Fitaovana fanomanana ny fanaparitahana graphene ultrasonic hydrodinamika
3. Rafitra fanomanana alikaola alikaola Ultrasonika
4. Rafitra fanomanana rano molekiola ultrasonika kely hydrônamika
5. rafi-pitantanana rano maloto ultrasonika